Aveco sy Spectra Logic dia manambatra ny tanjaka ho an'ny fampidinana farany hatramin'ny farany mba hitahiry vahaolana amin'ny workflow | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Management » Aveco sy Spectra Logic dia manambatra ny tanjaka ho an'ny fampandrenesana farany hatramin'ny farany mba hitahiry vahaolana amin'ny workflow
Aveco ASTRA MAM mifangaro tanteraka sy Spectra Logic BlackPearl dia manome fitantanana tsy misy fotony ireo atiny media lehibe
Aveco®, mpamatsy indostrialy mahaleo tena lehibe indrindra an'ny indostrian'ny fampitam-baovao, ary Spectra Logic®, mpitarika amin'ny fitahirizana angona sy vahaolana momba ny fitantanana angona, dia niara-nanambara androany ny fitantanana ny fananana haino aman-jery (MAM) sy ny vahaolana fitehirizana, izay efa voasedra tanteraka, voamarina ary asio rivotra.
Miorina amin'ny Aveco ASTRA MAM sy Spectra® BlackPearl® Converged Storage System, ireo mpampiasa dia afaka mitantana sy miaro ny atiny tsy misy fangarony - manomboka amin'ny fidirana hatramin'ny famokarana ka hatramin'ny arsiva sy fizarana. Ny fitantanana ny fiainana an-tsokosoko, ny fivezivezena mandeha ho azy ary ny fifandraisana amin'ny rahona dia ahafahan'ny mpampiasa farany mitantana ny vidiny ary manararaotra ny serivisy rahona izay misy dikany.
"Miaraka amin'ny Spectra BlackPearl mampifangaro tsy tapaka ny fizotran-drindrina fitantanana fitehirizana (ao anatin'izany ny arisiva) ao amin'ny vahaolana Aveco ASTRA MAM, ny mpampiasa dia afaka mitady sy mitadidy mivantana ny fananana na inona na inona fampirimana fitehirizan'izy ireo, na eo an-toerana izany na ao anaty rahona ao anatin'ny MAM," hoy i Hossein ZiaShakeri, filoha lefitra zokin'ny Spectra Logic an'ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa stratejika. "Ity no vahaolana optimum ho an'ireo fikambanan'ny haino aman-jery mitady fitehirizana sarobidy sy azo refesina miorina amin'ny fenitra misokatra amin'ny kasety, kapila fitahirizana zavatra na rahona, hahazoana antoka fa ho velona kokoa ny atiny fitahirizany."
Amin'ny fotony, ny ASTRA MAM dia manome database iraisana sy andiana fitaovana ho an'ny fampiharana ASTRA rehetra. Ny fananana ny fitaovana rehetra mifamatotra mafy manodidina ny rafitra fitantanana fananana haino aman-jery mahazatra dia mamela ny vidiny ambany kokoa, ny fiaraha-miasa tsara kokoa ary ny fizotran'ny asa tsotra kokoa. BlackPearl dia manome vavahady maoderina sy tsotra ho an'ny maritrano fitehirizana maro an'isa ary tafiditra tanteraka ao amin'ny vahaolana Aveco ASTRA MAM mamela ny fikarohana mivantana sy ny fahatsiarovana ny fananana.
(kitiho ny sary na eto raha mila dikanteny avo lenta)
"Ny tanjonay voalohany amin'ny ASTRA MAM dia ny hanome sehatra afovoany ho an'ny atiny rehetra ampiasaina amin'ny famokarana sy ny fifehezana master ary hanome ny mpandraharaha fomba tsotra nefa mahery hanatanterahana ny asa andavanandro," hoy i Pavel Potuzak, Tale jeneralin'ny Aveco. "Ny fampidirana Spectra BlackPearl dia miorina amin'io tanjona io amin'ny alàlan'ny fampidirana ao amin'ny arisiva mahery sy azo ovaina hahazoana vahaolana ingest-to-archive feno."
Aveco, miorina ao amin'ny Repoblika Tseky, Etazonia, India, Rosia ary Thailand, mamolavola, mivarotra ary manohana ny automatisation studio famokarana, automatique control master, ary ny rafitra playout fantsom-pifandraisana manerantany. Misy karazana maritrano, manomboka amin'ny fantsona marobe, asa marobe amin'ny tranokala kely mankany amin'ny rafitra kely mijoro irery, ary manomboka amin'ny famokarana farany sy hatramin'ny farany fanaovana fampitaovana hatramin'ny vokatra tsirairay. Miaraka amin'ny mpanjifa maherin'ny 300 any Eropa, Amerika, Azia, ary Afrika, Aveco dia manana ny haitao sy ny traikefa hahafahana manome flowflow, hifehezana ny fitaovana ampiasain'ny antoko fahatelo, ary hanome ny orinasan'ny Aveco ny fahatokisana sy ny fanohanana 24 ora. for. Tamin'ny taona 2019, nomena ny mari-pankasitrahana IBC Innovation ao amin'ny sokajy Content Everywhere ilay orinasa noho ny asany mandeha ho azy ho an'ny ETV Bharat ho an'ny rafitra mandeha ho azy izay mitondra ireo studio 24 sy fantsom-baovao 24 feno amin'ny fiteny 13 ho an'ny fanjifana ny vaovao amin'ny finday. Hatramin'ny niforonany tamin'ny 1992, Aveco dia nijanona ho orinasa tsy miovaova, fananana manokana miaraka amin'ny fanoloran-tena maharitra amin'ny fitomboana maharitra sy ny fanohanana ara-potoana.
Na fampielezam-baovao, fantsona fialamboly ankapobeny, fantsona mozika, na fikambanana fahitalavitra miantsena, Aveco dia manampy ireo orinasan-tserasera ho lasa orinasan-dahatsoratra, hamokatra, hitantana ary handefa atiny azo antoka, mahomby ary misy fiatraikany lehibe.
Misy fampahalalana bebe kokoa hita ao www.aveco.com, amin'ny mailaka [email voaaro], na amin'ny fiantsoana ny foibenay any Prague amin'ny + 420-235-366-707, ny biraon'ny New Delhi ao amin'ny + 91-989-901-1397, ny biraon'i Bangkok ao amin'ny +66 (0) 828 170 113, na ny Los Angeles birao amin'ny + 1-818-292-1489.
Momba ny Spectra Logic Corporation
Spectra Logic dia mamolavola vahaolana fitehirizana data sy fitantanana data izay mamaha ny olan'ny fitehirizana dizitaly maharitra ho an'ireo fikambanana miatrika ny fitomboan'ny angon-drakitra. Natokana manokana amin'ny fanavaozana fitahirizana mandritra ny 40 taona mahery, ny vokatra tsy mivadika sy ny fifantohan'ny mpanjifa Spectra Logic dia voaporofo amin'ny alàlan'ny fananganana ireo vahaolana avy amin'ireo mpitarika amin'ny indostria maro manerantany. Ny Spectra dia mamela ny fitehirizana angona sy fidirana am-polony am-polony taona maro amin'ny alàlan'ny famoronana fomba vaovao fitantanana vaovao amin'ny endrika fitehirizana rehetra — ao anatin'izany ny arisiva, backup, cold storage, rahona manokana ary rahona ampahibemaso. Raha te hahalala bebe kokoa dia tsidiho www.spectralogic.com/.
Previous: Ny Art Loft dia miditra amin'ny vanim-potoana faha-9 ao South Florida PBS!
Next: TAG Video Systems dia mahatratra ny toetoetran'ny AWS Technology Partner, manome ny mpanjifa bebe kokoa ny fidirana sy ny fahalalahana hametraka rindranasa fandefasana